विशेष प्रधानमन्त्री देउवाको अपराजित यात्रामा लगाउलान् त खगराजले ब्रेक ?
Ujyaalo मगलवार, मंसिर १९, २०७४ ०४:३१:००
डोटी, मंसिर १८ –मौन अवधि सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी अभियानको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनका उम्मेदवार खगराज भट्ट पनि चुनावी अभियानको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ । दुबै जनाले आ–आफ्नो जित सुनिश्चित बताउँदै आउनुभएको छ ।
संसदीय चुनावमा अपराजित रहँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको यसपटकको चुनावी यात्रा कस्तो रहला भन्ने बारे डडेल्धुरामा निकै चासो, चर्चा र अड्कल हुन थालेका छन् । कतिपयले देउवाको जित निश्चित रहेको भन्दै मतान्तरको विषयमा मात्र छलफल हुनसक्ने बताउँछन् भने कतिपयले एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेपछि देउवालाई विगतमा जस्तो सजिलो नहुने धारणा राख्ने गरेका छन् ।
वाम गठबन्धनबाट देउवाको प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्ट हुनुहुन्छ । यसभन्दा अघि देउवासँगै दुई पटक पराजित हुनुभएका भट्ट यस पटक एमालेको साथ पाएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
माओवादी एक्लै लड्दा पनि चुनौती दिएका भट्ट एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेकाले अहिले रोचक प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन गरिएको छ । ०४८, ०५१ र ०५६ सालको चुनावसम्ममा डडेल्धुरामा देउवालाई चुनौती दिने प्रतिस्पर्धी नहुँदा चुनाव जित्न सजिलो भएको कतिपय मतदाताको आँकलन छ ।
०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा भने देउवाले डडेल्धुरासँगै कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट पनि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि देउवा डडेल्धुरासँगै कैलाली ६ बाट उम्मेदवार बन्नुभयो । त्यतिबेला पनि डडेल्धुरामा देउवाका प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो माओवादी नेता खगराज भट्ट ।
यसपटक भने देउवाले भट्टसँगको मतान्तर बढाएर ११ हजार पुर्‍याउनु भयो । ०७० सालमा देउवाले २३ हजार ९ सय २० मत ल्याएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भट्टले १२ हजार ४ सय ९३ मत पाउनुभएको थियो । एमाले उम्मेदवार तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । अहिले स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा एमालेको अवस्था सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तित्वको असर डडेल्धुरामा पर्ने हुनाले स्थानीय चुनावको आधारमा मात्र नतिजा विश्लेषण अपूर्ण हुने स्थानीयको भनाई छ ।
को हुन् देउवासँग चुनाव लड्ने खगराज ?
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भट्टको जन्म २०३१ पुस २ गते डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका ४ चिपुरमा भएको हो । ०४७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएर राजनीतिमा लागेका भट्ट ०४७ सालमै तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको सदस्य भएर कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिनु भएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको क्रममा ज्यान गुमाएका आफ्ना दाजु जयराज भट्टको प्रेरणाले उहाँ कम्युनिष्ट राजनीतिमा लाग्नुभएको हो ।
आइएलसम्म पढ्नु भएका भट्ट ०५४ सालदेखि ०५८ सालसम्म अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो । विद्यार्थी फाँट छोडेपछि भट्ट तत्कालीन नेकपा माओवादीको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा सचिव भएर काम गर्नुभयो । पछि दार्चुला र बैतडीको ईञ्चार्ज समेत हुनुभयो । ०६० सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिमा पुगेका भट्टले सशस्त्र विद्रोहमा ९ महिना जेल जीवन बिताउनुभएको थियो ।
भट्टले देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भए पनि जिल्लाको विकास नगरेको आरोप लगाउदै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो चुनावी प्रचारको क्रममा पनि देउवाले केही गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ ।